We Fight We Win. -- " More than Media ": ခေတ်ပျက်သူဌေးဦးတေဇရဲ့ Air Bagan ရေကစားမဏ္ဍပ်မှာ ကုသိုလ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့သံချပ်ထိုး။
ခေတ်ပျက်သူဌေးဦးတေဇရဲ့ Air Bagan ရေကစားမဏ္ဍပ်မှာ ကုသိုလ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့သံချပ်ထိုး။
ခေတ်ပျက်သူဌေးဦးတေဇတို့သားအဖAir Bagan မဏ္ဍပ်မှာ လေယာဉ်မယ်အချောလှများနှင့်သင်္ကြန်ကိုကြို
ကုသိုလ်၊မေတ္တာ၊ဗေလုဝဦးဆောင်သည့်သာဓုပါဗျာ သံချပ်အဖွဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးဦးတေဇမဏ္ဍပ်မှာသံချပ်ထိုး။
ကုသိုလ်၊မေတ္တာ၊ဗေလုဝ They do whatever they can to revive tradition.
They will perform in front of people no matter who the owner of the stage.
Good for them so that kids can see what the real tradition is.